Ukutsala abalandeli, ungabathengi | Martech Zone
Ukutsala abalandeli, ungabathengi
NgoMvulo, Agasti 23, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 URyan Smith
Akululanga ukuphuhlisa isiseko esikhulu sabalandeli Twitter. Eyona ndlela ilula kukukhohlisa kunye nokuchitha imali yakho uthenga amawaka wabalandeli kwenye la kwi-intanethi "amashishini" anikezela ngeenkonzo ezinjalo.
Yintoni enokufunyanwa ngokuthenga abalandeli? Ke uza kuthini ukuba unabalandeli abali-15,000 abangenamdla kwishishini lakho nakumyalezo osithethayo? Ukuthenga abalandeli akusebenzi, kuba ukuba nokulandela okukhulu kwi-Twitter akuyi kuchaphazela ishishini lakho ngaphandle kokuba abalandeli bakho bayikhathalele le nto uyitwitter.
Sonke siwubonile umphumo wokuba nokulandela okukhulu kwi-Twitter; buza nje ii-Airlines zoMzantsi-ntshona. Isizathu sokuba abafana bathande uKevin Smith Unokwenza i-buzz enkulu kangaka ku-Twitter kungenxa yokuba abalandeli bakhe banomdla kwinto ayithethayo.
Ishishini linokuba nohlobo olufanayo lokulandela, kodwa kunzima kakhulu kwaye kuthatha ixesha. Okokuqala, kuthatha umxholo. Yenza isicwangciso sephepha lakho, kunye nento ofuna ukuyibeka kuyo. Thumela imiyalezo ebaluleke kubalandeli bakho. Ukuba ukuthengisa, thumela malunga nezahlulo kunye namatikiti Tweet malunga neziganeko ezenzeka ngasemva eziza kuba nomdla kubaphulaphuli bakho.
Emva koko, landela abantu okanye iinkampani ezifanelekileyo kwishishini lakho. Ukuba une-boutique ye-jean yoyilo, landela abaqulunqi kunye neenkokheli zeshishini lefashoni. Abaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo baya kulandela iphepha elinye, kwaye baya kukufumana ukuba ulandela bani na.
Okokugqibela, yiba nomonde. Imidiya yokuncokola ifana nokuloba. Uqhubeka uphosa isithiyelo phaya phandle, kwaye ngenye imini uza kuqala ukubasongela ngokungathi baphambene. Sebenza, khawuleza, kwaye ulumke malunga nomxholo wakho kwaye indawo yakho iya kukhula.
URyan nguMphathi wezeMidiya yoLuntu kunye noPhuhliso lweShishini eRaidious. Uyingcali kwezonxibelelwano noluntu egxile ekusebenziseni imithombo yeendaba njengesixhobo sonxibelelwano sentengiso. URyan unamava kwezemidlalo, kwezopolitiko, ekuthengiseni izindlu nomhlaba nakwamanye amashishini.
Ukubhloga ngokuBumbeneyo eMzantsi Afrika
Aug 23, 2010 ngo-6:23 PM
Kangangoko ndingathanda ukuvuma, ngelishwa amanani amakhulu anobunzima obuninzi kwaye aluphawu lwegunya. Ndingacela umngeni kuwe ukuba uvavanye ukuthenga ngenkampani enye, emva koko ukhule i-organic nenye. Uya kufumanisa ukuba iqela elinabalandeli abaninzi liya kukhula ngokukhawuleza. Ndinqwenela ukuba izinto zahluke kodwa azinjalo. Abantu bayathanda ukuba ngabahlali… kwaye amanani amakhulu anomtsalane.
Aug 23, 2010 ngo-6:34 PM
Ndizivile zombini – yiba nentlalontle; yimidiya yoluntu kunye ne-tweet kuphela malunga neshishini lakho - okanye ndicinga ukuba unokuba neeakhawunti ezimbini. Andikwazi ukuqhubeka nenye, ke ubathenga phi abo balandeli 🙂
Aug 24, 2010 ngo-10:14 PM
Ukuba uza kuthenga abaphulaphuli ngeakhawunti ye-Twitter okanye naliphi na elinye iqonga, kukho indlela engcono yokuyenza kunokuba "ukuthenga abalandeli" - maninzi amaqonga entengiso anokunikezela ngenqanaba elimangalisayo lokujolisa kuqhaqho kwindawo abaphulaphuli abanokuthi bafumane umxholo wakho ufanelekile - kwaye uyonwabisa -ngokuziphatha ekujoliseni, ukubuyisela kwakhona, njl. Plus, kunye nothungelwano oluninzi, unokuthenga ngesiseko seCPA kwaye uhlawule kuphela xa utyalo-mali lwakho lusebenza, kwaye kukho inzuzo eyongezelelweyo. yokwenza impembelelo kwiimbono kunye nokwazisa kunye neendlela zokuyila kumajelo eendaba atyebileyo ahlawula izabelo kakuhle ngaphaya kokucofa.
Yonke ingcamango yokuthenga abalandeli be-twitter ilungile ukuba uyinkampani ephendula ngokuthe ngqo ethengisa into yorhwebo kwaye idlala umdlalo wamanani. Ingcamango eyoyikisayo kuyo nayiphi na inkampani ezama ukwahlula kunye nokongeza ixabiso kwi-brand. Oku akwahlukanga kunokuthenga uluhlu lwe-imeyile, okanye ukuthenga uluhlu lweposi oluthe ngqo. Iseyi-spam kwincwadi yam, nokuba umntu uyavuma ukuhlawulwa ngokongezwa. Ukuthenga abalandeli kuphosakele inqaku - ayisiyiyo nje malunga nenani labalandeli, imalunga neentliziyo neengqondo kunye nokunyaniseka kunye nobudlelwane kwaye kunjalo, ukudibanisa iibrendi kwizipaji kunye nezinto ezikuzo.
Agasti 25, 2010 kwi-9: 30 AM
Ndiyayithanda indlela yokungena yokufumana abalandeli kwaye sihlala sibhengeza ngeenkonzo ezibonelela ngoku. Inqaku lam, nangona lingakhululekanga, kukuba abantu abanzulu kakhulu. Amanani aphantsi acima abantu kwaye abonise ukuba awunguye umthombo ogunyazisiweyo. Amanani aphezulu angakufumana ukutsalwa ngokukhawuleza.
Ngamanye amazwi, ukuthenga abalandeli akuthethi ukuba uthenga iintliziyo neengqondo zabo. Into oyithengayo linani eliphezulu ngokwaneleyo ukuze abo baneentliziyo neengqondo batsaleleke kuyo.